မရက်စက်ကြပါနဲ့... - MM Live News
October 12, 2019 MM Live
တစ်​လ သိန်၃၀၊ကားနဲ့ ​နေစရာတိုက်​ခြံ ရထားတဲ့ သူ​​တွေ​တောင် ​အဂတိလိုက်​စားမှု​တွေရှိ​နေတာ လစာ ၂သိန်းမ​ကျော်​၊​နေစရာအိမ်​ရာမရ၊ ကြုံရာကားစီးပြီး သွားလာ​နေရတဲ့ ​ကျောင်​းဆရာ၊ဆရာမ​တွေ ကျူရှင်​သင်​တာကို ခိုးစားတဲ့သူခိုး​တွေလို ချိုးနှိမ်​​ပြောခံ​နေရတာ​တော့ ရင်​နာစရာ​ကောင်​းလွန်​းပါ​တယ်​ …..
သမ္မတရှိပြီး အတိုင်​ပင်​ခံဆိုတာ​တောင်​ ထား​သေးတာပဲ ကျူရှင်​သင်​တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ​တွေဆိုတာ ကိုယ်​ပိုင်​ချိန်​မှာ ကိုယ်​တတ်​တဲ့ အလုပ်​နဲ့ ရိုးရိုးသားသား စာသင်​စား​နေကြတာကို သူခိုးလူမိသလို ဝိုင်​းရှုံ့ချ​နေ တာ​တော့ ရင်​နာစရာ …..
​ကျောင်​းဆရာ၊ဆရာမ​တွေ ကျူရှင်​မသင်​​စေချင်​ဘူးမလား? တာဝန်​ကျတဲ့​နေရာတိုင်​းမှာ ဝန်​ထမ်​းအိမ်​ရာကို ​သေချာ​လေး​ဆောက်​​ပေး၊ လခကို တန်​ရာတန်​​ကြေး​ပေး (ခုက တစ်​လကို ဆီဖိုးရယ်​၊​စျေးဖိုး​ရယ်​​တောင်​ မ​လောက်​လို့ အတိုးနဲ့​ချေး​နေရတဲ့သူ​တွေများကြီး)၊
အခန်​ ့မသင်​့လို့ ​ကျောင်​းကို သွားတဲ့လမ်​းမှာ Accidentဖြစ်​ရင်​​တောင်​ နစ်​နာ​ကြေး ​သောင်​းဂဏန်​း​လောက်​နဲ့ အသက်​​ပေးလိုက်​ရတဲ့ သူ​တွေရှိတယ်​ ….
​အောက်​ကို ​သေချာဆင်​းမကြည်​့ပဲနဲ့ ပါးစပ်​က​နေ အရူးချီးပန်​း ​ပြောပြီး ဖိနှိပ်​မ​နေကြပါနဲ့။ ပါးစပ်​ထွက်​လာသမျှ ​ရွှေထင်​ပြီး ​လေဖန်​းဝရန်​းချည်​တဲ့ သူ​တွေလည်​း ကိုယ်​့သားသမီး​ ကျူရှင်​ မထားပဲ​နေ​နေတာလားဆိုတာ နဖူး​ပေါ်လက်​တင်​စဉ်​းစားကြည်​့ကြပါဦး​နော်​ ….
ခိုင်​းစရာရှိမှ ပညာ​ရေးဝန်​ထမ်​း​တွေဆိုပြီး သွားဖြီးကြီးနဲ့ ​ခေါ်ခိုင်​းတာလည်​း ခင်​ဗျားတို့​တွေချည်​းပဲ …..။orginal writer
တစ္​လ သိန္၃၀၊ကားနဲ႔ ​ေနစရာတိုက္​ျခံ ရထားတဲ့ သူ​​ေတြ​ေတာင္ ​အဂတိလိုက္​စားမႈ​ေတြ႐ွိ​ေနတာ လစာ ၂သိန္းမ​ေက်ာ္​၊​ေနစရာအိမ္​ရာမရ၊ ၾကံဳရာကားစီးၿပီး သြားလာ​ေနရတဲ့ ​ေက်ာင္​းဆရာ၊ဆရာမ​ေတြ က်ဴ႐ွင္​သင္​တာကို ခိုးစားတဲ့သူခိုး​ေတြလို ခ်ိဳးႏွိမ္​​ေျပာခံ​ေနရတာ​ေတာ့ ရင္​နာစရာ​ေကာင္​းလြန္​းပါ​တယ္​….
သမၼတ႐ွိၿပီး အတိုင္​ပင္​ခံဆိုတာ​ေတာင္​ ထား​ေသးတာပဲ ….က်ဴ႐ွင္​သင္​တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ​ေတြဆိုတာ ကိုယ္​ပိုင္​ခ်ိန္​မွာ ကိုယ္​တတ္​တဲ့ အလုပ္​နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား စာသင္​စား​ေနၾကတာကို သူခိုးလူမိသလို ဝိုင္​းရွံု့ခ်​ေန တာ​ေတာ့ ရင္​နာစရာ….
​ေက်ာင္​းဆရာ၊ဆရာမ​ေတြ က်ဴ႐ွင္​မသင္​​ေစခ်င္​ဘူးမလား? တာဝန္​က်တဲ့​ေနရာတိုင္​းမွာ ဝန္​ထမ္​းအိမ္​ရာကို ​ေသခ်ာ​ေလး​ေဆာက္​​ေပး၊ လခကို တန္​ရာတန္​​ေၾကး​ေပး (ခုက တစ္​လကို ဆီဖိုးရယ္​၊​ေစ်းဖိုး​ရယ္​​ေတာင္​ မ​ေလာက္​လို႔ အတိုးနဲ႔​ေခ်း​ေနရတဲ့သူ​ေတြမ်ားႀကီး)၊
အခန္​ ့မသင္​့လို႔ ​ေက်ာင္​းကို သြားတဲ့လမ္​းမွာ Accidentျဖစ္​ရင္​​ေတာင္​ နစ္​နာ​ေၾကး ​ေသာင္​းဂဏန္​း​ေလာက္​နဲ႔ အသက္​​ေပးလိုက္​ရတဲ့ သူ​ေတြ႐ွိတယ္​ ……
​ေအာက္​ကို ​ေသခ်ာဆင္​းမၾကည္​့ပဲနဲ႔ ပါးစပ္​က​ေန အ႐ူးခ်ီးပန္​း ​ေျပာၿပီး ဖိႏွိပ္​မ​ေနၾကပါနဲ႔။ ပါးစပ္​ထြက္​လာသမ်ွ ​ေရႊထင္​ၿပီး ​ေလဖန္​းဝရန္​းခ်ည္​တဲ့ သူ​ေတြလည္​း ကိုယ္​့သားသမီး​ က်ဴ႐ွင္​ မထားပဲ​ေန​ေနတာလားဆိုတာ နဖူး​ေပၚလက္​တင္​စဥ္​းစားၾကည္​့ၾကပါဦး​ေနာ္​ …..
ခိုင္​းစရာ႐ွိမွ ပညာ​ေရးဝန္​ထမ္​း​ေတြဆိုၿပီး သြားၿဖီးႀကီးနဲ႔ ​ေခၚခိုင္​းတာလည္​း ခင္​ဗ်ားတို႔​ေတြခ်ည္​းပဲ …..။orginal writer
အကြွေးလေးနဲ့ ထိုင်းသွားမိပါတယ် ရုပ်အလောင်းအဖြစ်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမယ့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ငွေဝင်ဂါထာ
January 11, 2019 MM Live News
သီေပါမင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိခဲ့တဲ့ လက္ဝတ္ရတနာေတြထဲက ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ” ေက်ာက္ “
November 20, 2018 MM Live
ေရႊတိဂံုဘုရား အလွဴရွင္ေတြရဲ႕က်ိန္စာ ( ေၾကာက္စရာ က်ိန္စာ )
November 4, 2018 MM Live News
လပွတ္တာမြို့အနီးက အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်မိဘတို့အား ပြစ်မှားစော်ကား၍ ခွေးဘဝရောက်သွားသော မခင်လှ ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
October 17, 2019 MM Live
မန္တလေးတောင်အရှေ့ဖက်မှာ ဆိုင်ကယ် လမ်းကြုံလိုက်စီးတဲ့ သရဲမလေး
အအေး အခေါင်းများကို လူမသေခင် ကြိုပြင်ထားသလိုဖြစ်နေ၍ မသုံးရဲတဲ့ရွာ
သိကြားမင်း ရှိခိုး ခံထိုက်တဲ့ သား…
ဒေသခံ ပြည်သူများ ကြောက်လန့်နေကြရတဲ့ မကောင်းသည့် အတိတ်နိမိတ်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်ပြီး စိုးရိမ်နေကြ
17.10.2019 မှ 23.10.2019 အထိ တစ်ပတ်စာရရက်သားသမီးဟောစာတမ်း